Kostas Manolas oo ku dhaw inuu heshiis cusub u saxiixo Roma – Gool FM
Kostas Manolas oo ku dhaw inuu heshiis cusub u saxiixo Roma
Liibaan Fantastic September 26, 2017
(Roma) 26 Seb 2017 Daafaca reer Greek ee Kostas Manolas ayaa ku dhaw inuu heshiis cusub u saxiixo kooxdiisa Roma sida ay baahisay Corriere dello Sport.
Wadahadalada u dhexeeya maamulka kooxda Roma iyo wakiilka Kostas Manolas ayaa maraya haatan meel fiican, waxaana la filayaa in laacibku uu saxiixo heshiiska cusub marka laga soo laabto fasaxa kulamada xulalka ee isbuuca dambe.
Roma ayaa ku dadaalaysa sidii Kostas Manolas looga saxiixi lahaa heshiis dhacaya ilaa June 2022 kadib markii uu ku guul daraystay inuu ka tago kooxda suuqii soo xirmay markaas oo uu aad ugu dhawaa inuu ku biiro kooxda Zenit.
Manolas ayaa qaadan doona sanadkii mushaar dhan 3 milyan oo euro haddii uu saxiixo heshiiska cusub, waxaana lagu burburin karaa qandaraaskiisa lacag dhan 30 milyan oo euro.
Kostas Manolas ayaa diirada u saaran kooxaha ugu tunka wayn yurub sida Chelsea iyo Arsenal oo aad u doonaya saxiixa 26 jirka reer Giriig.
Neymar oo diyaar u ah kulanka Bayern Munich
TOOS u daawo: Toos u daawo goolasha UEFA Champions League - Goals Show - LIVE